Amandla akhuselayo obulwimi-mbini | US Taalsentrum
Op 12/06/2017 geplaas · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Ons tale geplaas
Yunivesiti ithile yase-Ithali yaxilonga iingqondo zamaqela ngamaqela abantu abaphethwe sisifo sokulahlekelwa yinkumbulo nesaziwa njenge-Alzheimer’s, oko kusenziwa njengenxalenye yophononongo. Isiqingatha kwabo bantu sasilwimi-mbini, ngeli lixa esinye isiqingatha sasilwimi-nye kuphela. Xa ucinga leliphi iqela elaba neziphumo ezincomekayo…
Phaya ekuqaleni kwalo nyaka, iYunivesithi iVita-Salute San Raffaele yaseMilan yakhupha iziphumo zalo zophononongo olwalumalunga negalelo lobulwimi-mbini kwisifo sokulahleklwa yingqondo esaziwa njenge-dementia, sifo eso sidla ngokuzibonakalisa njengesifo iAlzheimer’s. Olunye uphawu lwe-Alzheimer’s kukusilela kobuchopho ekugcineni ubomi buqhubeka, nto leyo kuthiwa yi-cerebral hypometabolism. Oku kuthetha ukuba ingqondo iba nobunzima bokuziguqulela iswekile ibe ngamandla – ingqondo iqalise ukulamba ke ngoko. Loo nto yenze ukuba imisebenzi efana nokukhumbula iqalise ukubanzima.
Abaphandi phofu bafumanisa ukuba izigulane ezithetha iilwimi ezingaphezu kwesinye – ikakhulu isiTaliyane nesiJamani kule meko zaqhuba ngcono kwimisebenzi yethutyana neyethuba elide yenkumbulo ngokuphinda-phindwe kathathu ukuya kwisibhozo kunabo bathetha ulwimi olunye. Oko kube njalo nangona izigulane ezilwimi-mbini zazikhethwe ngokukodwa kuba zinobuchopho obusilela kakhulu ekuguquleni iswekile!
Olu asilophononongo lokuqala ukufumanisa ukuba ukubalwimi-mbini kuya nceda ekulweni isifo sokulahlekelwa yinkumbulo: uphononongo lwaseKhanada olwapapashwa kwijenali yenzululwazi iCortex ngowama-2012 lwafumana ubungqina bokuqala obuphathekayo (ngoxilongo lohlobo lwe-CT) bokuba ukuthetha ubuncinane iilwimi ezimbini kuya kwazi ukulwa neziphumo zeAlzheimer’s. Ukusebenzisa iilwimi ezininzi kukhuthaza ingqondo ekomelezeni iziphelo zemithambo-luvo, kwakhiwe oko izifundiswa zithi nguvimba wengqondo, nto leyo ibambezela ukuqala kwesifo sokulahlekelwa yinkumbulo.
Ngoko ke, nika ingqondo yakho isifundo okanye izifundo ezimbini, ucele umngeni kubahlobo nabalingane beze kwincoko elwimi-ninzi! Njengoko uArthur Fletcher wakha watsho: “Asinto intle ukudlala ngengqondo”.
Ulwazi oluthe vetshe ngesi sihloko:
The impact of bilingualism on brain reserve and metabolic connectivity in Alzheimer’s dementia
Bilingualism as a contributor to cognitive reserve: Evidence from brain atrophy in Alzheimer’s disease
US TaalsentrumArtikels in Xhosa Dialogos Ons taleAmandla akhuselayo obulwimi-mbini